Yila i-penthouse kunxweme lwaseMojacar - I-Airbnb
Yila i-penthouse kunxweme lwaseMojacar
Iflethi yonke sinombuki zindwendwe onguAurora
Igumbi elinomtsalane elixhotyiswe ngokupheleleyo le-80m kumgca wokuqala oneembono zolwandle. I-solarium yangasese kumgangatho ophezulu we-65 m kunye neesofa, itafile yokutyela kunye ne-2 lounger yelanga, apho unokonwabela iimbono ezimangalisayo ngasese. Ngaphakathi kwidolophu ephucukileyo "iLos Patios" inyathelo kude nolwandle lwasendle lwaseMacenas kunye ne-5 min ngemoto ukusuka kumbindi weMojacar Playa apho uya kufumana indawo yokuthenga, iivenkile zokutyela, ii-pubs ... Ukudibanisa okugqibeleleyo kokuphumla kunye nokuzonwabisa.
Indawo yakho iphambi kweCastillo de Macenas kumgangatho ongaphezulu kunye nekona, kumda wolwandle kunye nemibono emangalisayo yolwandle kunye neentaba, ngaphandle ngokupheleleyo ngokufikelela kwi-terrace ukusuka kwigumbi lokuhlala kunye nakumagumbi okulala amabini. Igumbi lokulala elikhulu linegumbi lokuhlambela eline-en-suite elinebhafu kunye neewodrophu ezinkulu, ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo livuleleke kwigumbi lokuhlala elinemihombiso yale mihla yemizi-mveliso, ekhupha iNew York yeStudio 54.
Kumgangatho ophezulu kunye nokufikelela kwi-terrace ngezinyuko zangaphandle zangasese, enye yeendawo endizithandayo, i-solarium ene-pergola, i-sofas, i-lounger yelanga kunye netafile ye-gazebo ukusuka apho unokubukela khona ukuphuma kwelanga. Amava akhethekileyo .
Uya kuba ne-air conditioning ephakathi eshushu kunye nebandayo, i-Wi-Fi yasimahla ngaphandle komda wezixhobo (isantya esiphezulu se-fiber optic) kwindlu yonke kunye nee-TV ezihlakaniphile kwigumbi lokuhlala kunye nakumagumbi okulala amabini ... unokuqhagamshelwa kwinto oyithandayo. kolandelayo izithuba ezithathu ezizimeleyo, okuphambili!
Unokuqhagamshelana nam ngexesha lokuhlala kwakho njengoko ukhetha, ngefowuni, i-watsap okanye i-imeyile kwaye ndiya kukunceda nantoni na oyifunayo, iindawo ezikufutshane ezinomdla, iingcebiso okanye imibuzo ephathekayo malunga nendlu. Sikwanazo neemeko ezikhethekileyo ngexesha lasebusika xa ufuna ukuchitha ixesha elide usebenza ngocingo ukusuka eMojacar kunye nazo zonke izixhobo, uya kuba ne-intanethi ngesantya esiphezulu kunye ne-fiber optics, ii-smart TV, indawo yokupaka engaphantsi komhlaba kunye negadi, njl. ekhaya okanye kwi-ofisi! Ngeevenkile ezinkulu kunye neevenkile imizuzu eli-10 ngemoto kodwa ngokuzola okuphezulu kwendawo yokuhlala ekude nje neziko ukumamela kuphela isandi solwandle ebusuku.
Unokuqhagamshelana nam ngexesha lokuhlala kwakho njengoko ukhetha, ngefowuni, i-watsap okanye i-imeyile kwaye ndiya kukunceda nantoni na oyifunayo, iindawo ezikufutshane ezinomdla,…